Excitement As Court Sets Museveni Critic Stella Nyanzi Free - allAfrica.com
After being sentenced to 18 months in prison for the "cyber harassment" of President Yoweri Museveni, Ugandan activist Stella Nyanzi has won her court appeal and a judge has ordered her immediate release. Nyanzi, who is one of Museveni's fiercest critics, had been in jail since November 2018.
Monitor, 20 February 2020
The International War Crimes Division of the High Court in Kololo, Kampala has ordered for the release of Dr Stella Nyanzi from Luzira Prison where she has been for months. Read more »
DW, 20 February 2020
Uganda's High Court overturned Stella Nyanzi's convictions on the grounds of lack of jurisdiction and fair hearing. Nyanzi had been sentenced to 18 months in jail for "insulting"… Read more »
Citizen, 20 February 2020
Dr Stella Nyanzi collapsed at the International War Crimes Division of the High Court in Kampala on Thursday minutes after the judge order for her release from Luzira Prison where… Read more »
The High Court in Kampala has awarded former Makerere University research fellow and activist, Stella Nyanzi over U.S.$13,000 in damages for the violation of her right to movement. ... Read more »
A Ugandan high court has pushed back to November 8, 2019, activist Stella Nyanzi's case against Makerere University, in which she accuses the institution of refusing to pay her ... Read more »
On August 2, 2019, Magistrate Gladys Kamasanyu Musenze sentenced controversial Makerere University academic Stella Nyanzi to 18 months in prison, after she was convicted of cyber ... Read more »